Kedu uru m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụta YouTube?
Egosiputara nke kachasi elu, eji aka nye.
Anyị na-ekiri vidiyo gị ma dee nkọwa dị mkpa.
Nnyefe na-agbasa karịa ọtụtụ ụbọchị.
Nsonaazụ na-amalite na awa 48-72 & gaa n'ihu ruo mgbe ha mechara.
Anyị na-anapụta 100% nke usoro gị mgbe niile!
Kedu ihe kpatara onye ọ bụla na-eji azụta YouTube?
Dị ka okwu a na-aga; ịbụ mmadụ abụghị ọrụ ụbọchị, yabụ m ga - asị ka ịnweta vidiyo na-aga nke ọma ma ọ bụ viral na YouTube abụghị ọrụ ụbọchị. Otu ihe mere na ọtụtụ ndị achọghị ịnabata bụ na; YouTube bu igwe eji ekwu okwu nke mgbasa ozi nke ya. Otutu ndi mmadu huru YouTube dika nnukwu Video Market; ebe ị na-aga mgbe ịchọrọ ịnwe vidiyo nke a na-eketa na nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi. Echiche a dị njo. Maka anyị ka anyị ghọta nke a; ka anyị were vidiyo ọ bụla anyị bulitere dị ka mmelite ọkwa. Eketie fi didie ke idem ke ini owo ndomokiet etịn̄de m ordịghe ekere aban̄a idaha fo? Okwu onye na-ekiri bụ ụzọ kachasị mma iji chọpụta mmeghachi omume ya na vidiyo gị. Yabụ ugbu a, ị hụla ihe kpatara o ji dị mkpa ime ka ndị mmadụ kwuo okwu na vidiyo gị. Nkwupụta YouTube bụ isi ihe na - eme ka ọdịiche dị n'etiti vidiyo nkịtị na nke a ma ama. O doro anya na vidiyo na-ewu ewu ga-enwekwu nkwupụta na njikọ aka karịa vidiyo nkịtị. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka vidiyo gị bụrụ nke a ma ama, ọ dị mkpa ka ndị mmadụ kwuo okwu na vidiyo gị. Ọ bụrụ na ịnwetaghị mmeghachi ahụ anụ ahụ, mgbe ahụ usoro kachasị mma ga-abụ ịzụta ihe YouTube kwuru.
Ugbu a, ka m gwa gị ihe kpatara mmadụ niile ji na-azụta ihe ndị YouTube kwuru:
Mgbakwunye Aka: Mgbe ịzụrụ nkwupụta YouTube na vidiyo gị, a ga-anwa ndị na-ahụ vidiyo ọhụrụ na-ahụ vidiyo gị ilele ma chọọ itinye onwe ha na ngalaba nkọwa. Nke a ga - eme ka ọtụtụ ndị na - ekiri na - ekwu okwu na vidiyo gị, si otú a na - abawanye n'ọkwá ya na ọchụchọ ahụ. N’ihi nke a, ọtụtụ mmadụ ga-achọta vidiyo gị.
Wepụ nsen Ọjọọ: Anyị niile maara YouTube abụghị ebe ahụ ihe niile zuru oke. E nwere ọtụtụ ibu iro na ịkpọasị. Fọdụ ndị mmadụ nwere obi ike ga-eji ọtụtụ nyocha ndị na-adịghị mma jubiga ngalaba gị. Otu ụzọ ị ga - esi chekwaa ọnọdụ a bụ ịzụrụ ihe ndị YouTube kwuru iji mee ka ha gbazee mgbe ị na - akọ ha.
Mmezu Echiche Gị: Otu ihe nwere ike iwepu echiche ị zụtara na masịrị gị dị ala bụ nha ihu echiche dị ala. Ọtụtụ mgbe, mgbe ịnwere echiche na mmasị ndị sitere n'okike, ndị ọrụ dị otú ahụ na-ahụ na ọ dị mma ịhapụ nkọwa ma ọ bụ abụọ. Yabụ ka ịzụta echiche na mmasị YouTube, cheta n'uche ịzụta ihe ka vidiyo gị wee ghara ile anya enyo. Commentszụta ihe ga - eme ka echiche gị zụrụ na ihe ndị masịrị gị pụta na ọ bụ ihe nje.
Ndụmọdụ ngwa ngwa, mgbe ịchọrọ ịzụta nkọwa, gbaa mbọ ịzụta azịza dị mma, nke ahụ ka anyị na-ebuga. Eziokwu ndị a enweghị ike ịdabere na ụzọ algorithms YouTube. Eziokwu ndị a sitere n'aka ndị a kwụrụ ụgwọ iji nye echiche dị mma, bara uru na vidiyo gị. Okwu ndị a bara uru ma bụrụ eziokwu. Ọ ka mma karịa nkwupụta adịgboroja sitere na bots nke bụ oge ọtụtụ; di na nwunye nke okwu juputara n’amaghi ihe n’uche obula.
Kedu ihe na-eme ka okwu gị dị elu?
You zụta ihe ndị anyị si n’aka YouTube, ndị otu anyị ga-elele vidiyo gị wee bido ịde nkọwa dị mkpa, echiche na-ewuli elu banyere vidiyo gị. Anyị na-agagharị maịl ahụ ma agbasa nnyefe nke nkọwa gị n'ọtụtụ ụbọchị.
Imirikiti ndị ọzọ na - eweta ndị ọzọ na - ekwupụta ụdị “vidiyo dị ukwuu!” N'ihi na ọ ka nfe ma na-egbukarị oge. Ọzọkwa, ha ga-aga n'ihu na-ekwupụta ihe niile 20 na-ekwu dịka ọmụmaatụ n'ime obere oge.
Ihe iseokwu banyere ịhụ nnabata ọ ga-ekwu ogologo oge bụ na ndị mmadụ nwere ike ịhụ mgbe edere ya ma ọ bụrụ na ha niile mere n'otu oge, ọ bụ ama ama na onye ahụ zụtara ha.
Mgbe iji ọrụ anyị, ha na-apụta ihe dị iche iche na eke!
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe ka vidiyo m ịmalite inweta azịza?
Ebe ọ bụ na anyị na-elele vidiyo gị, dee nkọwa dị mkpa ma jiri aka gị nyefee ha, ọ na-ewe ezigbo oge. Na mkpokọta, nkwupụta gị ga-amalite ịpụta na vidiyo gị n'ime awa 48-72 ka etinyechara iwu gị wee bụrụ ndị ga-agbasawanye n'ime ụbọchị ole na ole iji mee ka ha yie ihe dị mma na ihe ndị dị ndụ.
Kedu ihe ole dị ole m ga-enye iwu maka vidiyo?
Ọnụ ọgụgụ ole na ole nke anyị ga-ezigara vidiyo bụ ihe 5 kwuru. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị nyere iwu 10, ị nwere ike nyefee 1 na URL vidiyo 2 maka anyị ka anyị gbasaa ihe ngbanye.
Ọ bụrụ na ị nyere iwu 20, ị nwere ike itinye 1 na URL vidiyo 4.
Ihe mere ị ga-eji zụta nkọwa YouTube omenala iji too ọwa gị
N'ihe gbasara ọdịnaya vidiyo ogologo oge, ọ nweghị ikpo okwu buru ibu na mbara ụwa karịa YouTube. Kwa ụbọchị, ikpo okwu na-ahụ ihe karịrị nde 30 ndị na-ekiri ihe na-arụsi ọrụ ike, bụ ndị na-eri ihe karịrị 1 ijeri awa ọdịnaya kwa ụbọchị. Ọnụọgụ ahụ abụghị ihe dị egwu, na ihe kacha dị egwu bụ na a na-ahazi ha ka ha na-eto n'ihu ka ikpo okwu na-ebuwanye ibu.
Ọganihu (ma ọ bụ ọdịda) nke ndị na-emepụta ọdịnaya na YouTube dabere n'ụdị dị iche iche. Elere anya bụ ihe kacha mkpa. Agbanyeghị, algọridim YouTube na-atụkwa ọdịnaya dabere na ntinye aka nke onye ọrụ, ya bụ, ndị ọrụ ole na-eme vidiyo site na mmasị, enweghị mmasị na nkọwa. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ka ntinye aka nke onye ọrụ na-abawanye, ka ọdịnaya gị ga-adị elu karị ga-adị n'elu ikpo okwu.
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, YouTubers ọhụrụ echewo ọgụ dị elu n'ihe gbasara ịmepụta njikọ aka onye ọrụ. N'ofe niche ọ bụla, ndị na-emepụta ọdịnaya dabeere na YouTube na-abata aghaghị ịsọ mpi na ụfọdụ YouTubers ama ama na mbara ala.
Dị ka o kwesịrị ịdị, ndị meberela onwe ha aha bụ ndị ndị na-ekiri ọwa ha na-etinyekarị aka. Nke a butere ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke ndị YouTuber ọhụrụ na-ahọrọ zụta ihe YouTube iji bulie stats njikọ aka ndị ọrụ ha.
N'ime edemede a, anyị ga-eme ka ị mata ihe niile mere ịzụrụ nkọwa YouTube omenala bara uru. Mana tupu anyị eruo ihe kpatara ya, ka anyị leba anya na ụfọdụ ndụmọdụ na aghụghọ ị nwere ike itinye n'omume maka ị nweta nkọwa ndị ọzọ n'ofe vidiyo gị niile. Yabụ, na-enweghị oge ọzọ, ka anyị bido!
Na-abawanye nzaghachi n'ofe vidiyo gị n'ụzọ nkịtị: Nke a bụ otu ị ga-esi mee ya
Nnukwu mwepu na uto organic nke ntinye aka ndị ọrụ na YouTube bụ na ọ ga-ewe ogologo oge. Agbanyeghị, n'agbanyeghị uto organic na-ewe oge, ọ bụ ụzọ kacha mma isi too ọwa YouTube gị. Algọridim YouTube nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ọwa na-eto eto na nke na-adabere naanị na bots. Yabụ, tupu ị chee echiche ịzụrụ nkọwa, mmasị, echiche, ma ọ bụ ndị debanyere aha, ọ kacha mma ịnye ọwa gị oge ka ọ na-eto eto. Gụkwuo ka ịmata ihe ị nwere ike ime iji mee ka ọnụ ọgụgụ na-ekwu na vidiyo gị dị elu.
Echela ka onye ọ bụla ọzọ malite mkparịta ụka: YouTube nwere njiri ikwu okwu pinned, nke na-enye ndị okike ohere itinye ihe ha kwuru n'elu ngalaba nkọwa. Njirimara a na-ahapụ ndị okike ịmalite mkparịta ụka na vidiyo ha na-echeghị onye ọ bụla ọzọ. Yabụ, oge ọzọ ị bulite vidiyo, cheta itinye nkọwa. Ihe ị na-ede dị ka nkọwa pinned bụ nke gị kpamkpam. Agbanyeghị, n'ezie, ọ ga-egosipụta oku na-eme ihe (CTA). Dị ka ihe atụ, 'Ọ bụrụ na i lere vidio ahụ dum, biko zaa ajụjụ ma gwa m ihe i chere banyere ya.'
Mgbe ọ bụla ị nwetara nkwupụta, zaghachi ya: Ọtụtụ ndị na-amu amu YouTubers na-adị ngwa daa n'akụkụ ụzọ n'ihi ihe dị mfe - ha anaghị ewepụta oge iji zaghachi ihe ndị na-ekiri hapụrụ na vidiyo ha. Nke bụ́ eziokwu bụ na ịza ajụjụ, n’agbanyeghị na ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ bụ nkwanye ùgwù bụ́ isi.
Ma ị zara azịza ma ọ bụ na ịzaghachighị bụ ihe ndị na-ekiri ndị ọzọ na-ekiri vidiyo gị ga-ahụkwa. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, a ga-agba ọtụtụ ndị ọrụ ume ịza ajụjụ na vidiyo gị ma ọ bụrụ na ha ahụ na ị na-aza ajụjụ n'egbughị oge. Mgbe ndị na-ekiri hụrụ na YouTuber anaghị aza azịza, ha na-ewere ya dị ka ihe ịrịba ama nke YouTuber adịghị njọ ma ọ bụ na-akpachapụ anya nke ọma. N'ihi ya, a na-ebelatakwa mkpali ha ịza ajụjụ na vidiyo.
Tinye okwu ole na ole na vidiyo gị: Ọtụtụ ndị YouTube jisiri ike ịbawanye ọnụ ọgụgụ nke nkwupụta na vidiyo ha ngwa ngwa site na iji aghụghọ dị mfe - na-egosipụta ihe kacha mma na vidiyo ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na vidiyo gị gara aga nwetara nkọwa iri, họrọ 2-3 nke kacha mma wee gosi ha na vidiyo gị na-esote, ọkachamma na njedebe nke vidiyo. Ọzọkwa, mee ka ndị na-ege gị ntị mara na ị ga-eme nke a maka vidiyo gị niile. Tukwasi ayi obi; nke a bụ aghụghọ na-adịghị ada ada nke na-arụ ọrụ mgbe ọ bụla etinyere ya n'ọrụ. Ihe kpatara ya bụ na e nwere ọtụtụ ndị ọrụ YouTube na-achọ ka e gosipụta ya n'ụzọ ụfọdụ na vidiyo. N'ezie, ha nwere ike ha agaghị abụ ndị na-emepụta ọdịnaya n'onwe ha, mana nke ahụ anaghị ewepụ ikike ha ịchọ nlebara anya.
Gbaa ndị na-ekiri ume ka ha lelee vidiyo nke onye nrụpụta ọdịnaya ọzọ mere na niche gị: N'ezie, mgbe ị gụchara isi ihe na-agba ume, ị nwere ike ịnọ na-eche echiche dị aṅaa ka a ga-esi mee nke a. E kwuwerị, ị ga-abụ naanị ịkwalite onye asọmpi, nri? Agbanyeghị, eziokwu bụ na YouTube, ebe ọ bụ ikpo okwu na-asọmpi nke ukwuu, na-enyekwa ndị okike ọdịnaya ohere inweta ọtụtụ ụgwọ ọrụ site na imekọ ihe ọnụ. Ka gị na onye nrụpụta ọdịnaya yiri ya na niche gị, ọ kacha mma ibu ụzọ ziga ozi nkeonwe. Ọ kwesịrị ịrụ ọrụ dị ka nke a - ị na-agba ndị na-ege gị ume ka ha lelee vidiyo nke onye okike gị na ya na-arụkọ ọrụ bulitere. I kwesịkwara ịgwa ndị na-ege gị ntị ka ha hapụ okwu ndị dị ka "Aha ọwa gị' zitere m ebe a." Na nloghachi, onye okike gị na ya na-emekọ ihe ga-eme otu ihe ahụ, na-ewepụtakwu nkọwa na vidiyo gị.
Bụrụ onye na-akọwa ihe n'onwe gị: Can't nweghị ike ịtụ anya ọtụtụ nkọwa n'ofe vidiyo gị na YouTube ma ọ bụrụ na ị bụghị onye na-ekwu okwu n'onwe gị. Dịka onye nkọwa, ọ dị mkpa ka ị hapụ nkọwa na vidiyo YouTubers ọkacha mmasị gị na ndị na-emepụta ọdịnaya ndị ọzọ na niche gị. Ụzọ kacha mma isi mee nke a bụ itinye ụfọdụ ọchị na/ma ọ bụ amamihe na nkọwa gị. A na-ahụtakarị okwu na-akpa ọchị na/ma ọ bụ ihe ọchị site n'aka ndị na-ekiri ya. Ha na-agbakwa ndị na-ekiri ume ka ha gaa na ọwa YouTube gị ka ha hụ ụdị ọdịnaya ị ga-enye.
Jụọ ndị na-ege gị ntị ajụjụ: Ndị otu na-ege gị ntị na YouTube ga-enwerịrị ihe ma ọ bụ abụọ ikwu gbasara ụdị vidiyo ị ga-eme. Agbanyeghị, ị gaghị ama echiche ha ruo mgbe ị na-ajụ ha ajụjụ ozugbo. Ewezuga ịjụ ha ihe ha chere gbasara vidiyo gị dị, echefula ịjụ ha maka ụdị vidiyo ha ga-achọ ịhụ n'aka gị n'ọdịnihu. Mgbe ị na-ajụ ndị otu na-ege gị ntị ajụjụ ozugbo, ị na-eme ka ha dị mkpa ma tinye ya, nke na-eme ka o yikarịrị ka ha ga-aza ajụjụ na vidiyo gị.
Mepụta vidiyo QnA maka ịza ajụjụ ndị na-ege gị ntị: N'afọ ndị na-adịbeghị anya, vidiyo QnA na-ewu ewu na YouTube arịgoro elu. Vidiyo QnA na-egosipụtakarị ndị na-emepụta ọdịnaya na-enye azịza zuru ezu nye nkọwa ndị ha ji aka họrọ. N'ezie, ha yiri ịza ajụjụ site n'itinye okwu na kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka. Agbanyeghị, eziokwu ahụ bụ na ị ga-agwa ndị na-ege gị ntị okwu ga-enwe mmetụta dị iche. Ọ bụrụ na ị jisiri ike zaa ajụjụ ndị na-ekiri gị nke ọma, ha nwere ike ịgakwuru gị maka azịza ọzọ n'ọdịnihu. Ị nwekwara ike iji atụmatụ nkwanye ndụ YouTube na-eduzi nnọkọ QnA ozugbo, nke dị irè karị n'ihe gbasara iwulite njikọ mmetụta uche n'etiti ndị na-emepụta ọdịnaya na ndị na-ege ntị.
Na-eme ihe onyinye ugboro ugboro: Ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ mmetụta na / ma ọ bụ nwere njikọ na ika, ị nwere ike ịme onyinye. Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi na-eme ihe inye onyinye, otu n'ime ụzọ kachasị mma bụ ịhọrọ ndị mmeri dabere na nkwupụta. O doro anya na ị ga-ahụ ọtụtụ okwu ozugbo ị kwuputara na ị ga-enye ndị meriri emeri ihe nrite dabere na nkwupụta ha. N'oge na-adịbeghị anya, ihe inye onyinye aghọwo ihe ewu ewu maka ma ụdị na ndị na-emepụta ọdịnaya, ọ bụghị ihe ijuanya. A sị ka e kwuwe, ọ bụ nkwalite ngwaahịa maka ụdị ndị a yana ịrị elu ngwa ngwa na ntinye aka onye ọrụ maka ndị okike ọdịnaya.
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na uto organic ọwa gị nwere oke?
Anyị ewerela gị ụzọ niile enwere ike isi na ọwa YouTube gị nweta uto organic. Agbanyeghị, nke bụ eziokwu bụ na enweghị nkwa na ụzọ ndị a ga-ebute uto ngwa ngwa maka ọwa gị. Ọtụtụ ndị YouTube, n'agbanyeghị itinye ndụmọdụ na aghụghọ ndị a n'ọrụ ruo ọnwa na afọ, anaghị enweta nnukwu uto. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-etinye mgbalị siri ike ma ị nwetaghị nsonaazụ achọrọ, ị ga-enwe nkụda mmụọ. Nke a nwere ike tinye mgbakasị ahụ n'ọchịchọ YouTubing gị wee duga gị n'ịkwụsị ikpo okwu kpamkpam.
Agbanyeghị, ozi ọma ahụ bụ na ọwa YouTube gị nwere ike itolite ọbụlagodi ma ọ bụrụ na uto organic ya adịghị mkpa. Ụbọchị ndị a, enwere ọrụ na-enye ndị YouTube ohere ịzụta ndị debanyere aha, echiche, mmasị na nkọwa iji mee ka ọwa ha na-eso na ntinye aka nke onye ọrụ. Ebe anyị na-elekwasị anya naanị na nkwupụta na post a, ka anyị banye n'ime nkowa maka ihe kpatara o ji dị mma ịzụta ihe YouTube. Anyị ga-elebakwa anya na ọnyà ndị nwere ike ịnweta ndị na-achọ YouTubers nwere ike izute mgbe ha zụrụ ihe YouTube.
Ịzụta nkwupụta YouTube: Ọnyà ndị ị kwesịrị ịpụnarị na ya
Enwere ụdị okwu YouTube abụọ ị nwere ike ịzụta - nkwupụta omenala na nkọwa bot. Azịza bot, mmasị, na ndị debanyere aha na-adịkarị ọnụ karịa nke ndị omenala. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na mmefu ego siri ike, ịzụrụ nkọwa bot nwere ike ịdị ka nhọrọ kacha nwee ezi uche. Agbanyeghị, nke bụ eziokwu bụ na ebe ndị debanyere aha bot na nkọwa ga-ebulite ọnụ ọgụgụ ndị metụtara ọwa YouTube gị ngwa ngwa, ha nwere ọtụtụ ọghọm. Na ngalaba a, anyị ga-eme ka ị mata ihe niile kpatara ị ga-eji zere ịzụrụ nkọwa bot, mmasị, echiche na ndị debanyere aha.
Amụma njikọ aka YouTubeDị ka amụma ntinye aka nke YouTube, amachibidoro ndị ọrụ iji sistemu akpaaka maka ịbawanye ọnụọgụ metrik dị ka nlele, nkọwa, mmasị na ndị debanyere aha. Yabụ, ọ bụrụ na ịzụrụ nkọwa YouTube n'ụdị bots, ọ ga-abụ na ndị nhazi ikpo okwu ga-egosipụta ọwa gị. Na-emekarị, ọwa na-adabere naanị na bots maka uto na ntinye aka nke onye ọrụ bụ ndị nhazi na algọridim nke ikpo okwu na-ajụ. N'ezie, ịzụrụ bots ga-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ gị ịrị elu ngwa ngwa yana ọnụ ọgụgụ mmasị, echiche na nkọwa. Agbanyeghị, n'ikpeazụ, amụma ntinye aka YouTube ga-akwụsịrịrị uto ọwa gị.
Akụkụ nkọwa chaotic na enweghị isi: N'ezie, ihe ndị a na-ekwu na vidiyo kwesịrị ịdị mkpa na vidiyo ahụ. Ọ bụrụgodị na ọ bụ egwuregwu, o kwesịrị inwe ihe ọ pụtara n'ihe gbasara vidiyo ahụ. Otú ọ dị, mgbe ịzụrụ bot comments na YouTube, ọtụtụ n'ime okwu ndị ha na-emepụta agaghị enwe isi. Mgbe ewepụtara nkwupụta ndị dị otú ahụ ruo ogologo oge, ngalaba kwuru n'ofe vidiyo gị ga-amalite ịdị ka ọgbaghara na ọgbaghara. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ndị na-ekiri organic na ndị na-ekwu okwu nwere ike ịkwụsị site na nkwupụta bot. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọtụtụ ndị ọrụ ga-aghọta na ọwa ahụ na-adabere na bots maka uto site n'ile anya na nkwupụta. N'ikpeazụ, nke a nwere ike ịkọwa mbibi dị ka ihe ịga nke ọma nke ọwa gị metụtara.
Mfu ego enwetara mgbasa ozi: Ọ bụrụ na ịmalite ịkpata ego na vidiyo YouTube gị, ọtụtụ n'ime ya ga-abụ ego mgbasa ozi. Ntinye ego mgbasa ozi bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa maka ndị na-achọ YouTubers iji chekwaa. Agbanyeghị, iji hụ na ego mgbasa ozi na-aga n'ihu, ọwa gị ga-agbaso iwu YouTube. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na ị na-azụta ndebanye aha bot na nkọwa, ị na-aga megide Usoro na Ọnọdụ YouTube. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọ nwere ike ịbụ na YouTube ga-ebipụ ego ị na-enweta na mgbasa ozi. Yabụ, ọbụlagodi na ị nwere ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha dị elu yana narị narị puku kwuru puku mmasị na nkwupụta n'ofe vidiyo gị, ị gaghị enweta nnukwu ego na YouTube.
Nkwụsị nke ọwa YouTube: Dịka, YouTube anaghị akwụsị ọwa ndị guzobe onwe ha naanị na ike nke bots. Kama nke ahụ, ntaramahụhụ ahụ dị aghụghọ karịa - ọwa ndị na-ebugharị bot anaghị ebute oke dịka ọwa ndị wulitere onwe ha na uto organic. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịmeghị mbọ ọ bụla irube isi na Usoro na Ọnọdụ YouTube n'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị ugboro ugboro, ọ ga-abụ na ndị njikwa YouTube ga-eme ihe siri ike. N'ọnọdụ kacha njọ, a ga-akwụsị ọwa YouTube gị. Ọ bụrụ na ịmalitela ọwa gị n'oge na-adịbeghị anya, nkwụsị ya agaghị emejọ gị ahụ nke ukwuu. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nọrọla ọtụtụ afọ ịkwalite nka YouTubing gị ma na-agba ọsọ ọwa gị, nkwụsị ọwa gị nwere ike ime ka ị laghachi azụ n'ụzọ dị anya.
Ịzụta nkwupụta YouTube omenala: Ihe niile kpatara ha ji baa uru
Ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta nkọwa, ọ kacha mma ịhọrọ nkwupụta YouTube omenala karịa nke bot mepụtara. N'akụkụ a nke akụkọ a, anyị ga-agafe ihe niile mere ịzụrụ nkọwa YouTube omenala bara uru. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ọwa YouTube jisiri ike mee ka ọ bụrụ nnukwu ekele maka nkwupụta YouTube omenala, yana ohere ọ bụla na ọwa gị ga-aga nke ọma site n'enyemaka ha. Yabụ, na-enweghị igbu oge ọzọ, ka anyị banye na nkọwapụta:
Okwu bara uru ma dabara adaba: Anyị atụleworị ka azịza ndị bot na-esi na-abụkarị ndị enweghị isi. Otú ọ dị, mgbe ịzụrụ nkọwa omenala maka ọwa YouTube gị, ị nwere ike ịhazi ihe ndị a ka ha mee ka ha dabara na ọdịnaya vidiyo gị. Nke a nwere ike ime nnukwu ọdịiche, dịka ndị na-ekiri na-agagharị na ngalaba nkọwa na YouTube iji sonye na mkparịta ụka na-atọ ụtọ. Ọ bụrụ na onye na-ekiri ahụ hụ ọtụtụ nkwupụta bot sitere na otu vidiyo gị, ọ ga-abụ na onye na-ekiri ya ga-eji ezi ntinye aka gaa na vidiyo ọzọ. Yabụ, cheta ịzụta nkọwa ahaziri.
Obere nyocha site na ndị nhazi YouTube: Ndị na-ahụ maka YouTube akwalitela egwuregwu ha n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ma ọ bụrụ na ha achọpụta na ịzụrụ ihe YouTube n'ụdị bots, ọwa gị ga-enwe nsogbu. Ihe nwere nkwupụta bot sitere na YouTube bụ na ọ dị mfe ịhụ ya nke ukwuu. Vidiyo ọ bụla nwere ọtụtụ okwu na-enweghị isi nọ n'ihe egwu nke ndị nhazi ga-acha ọbara ọbara. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ maka nkwupụta ahaziri ahazi, ọ ga-adị mfe ịgbanarị nyocha nke ndị nhazi. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọwa gị agaghị anọ n'ihe egwu ọ bụla, n'agbanyeghị na ị ga-azụta nkọwa.
Mmụba echiche organic na ntinye aka: Mgbe mmadụ hụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ na-etinye aka na otu ihe, onye ahụ na-enwekarị mmasị ịmata ihe ma na-enwe mmetụta nke itinye aka na ya - nke a bụ ọdịdị mmadụ. Yabụ, ọ bụrụ na ịzụrụ nkọwa YouTube iji mejupụta ngalaba nkọwa vidiyo gị, algọridim YouTube ga-akwalite vidiyo ahụ karịa. Nke a ga-eduga n'ọhụụ ndị ọzọ n'ọdịniihu, ọ ga-agbakwa ọtụtụ ndị na-ekiri organic ume ịhapụ echiche ha na vidiyo gị. N'ime ogologo oge, nke a ga-ahụ na vidiyo gị nwere ndị na-ekiri organic na ntinye aka, nke ga-enyere aka idobe ọwa gị na ọdịnaya ya n'aka ndị nhazi YouTube.
Ohere ọzọ nke ịga viral: Mgbe vidiyo na-agbasa, ndị na-emepụta ha na-achọkarị aha na akụ na ụba n'otu abalị. Agbanyeghị, ka vidiyo wee banye viral, ha ga-enwerịrị njikọ aka ndị ọrụ dị oke elu. Na-emekarị, mgbe vidiyo viral nọ na ọkwa mmalite ya, ya bụ, mgbe ọ na-abụghị nke nje, ndị na-ekiri ya na-achọ ihe ndị ọzọ na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ na vidiyo gị enweghị ihe ọ bụla gbasara nkwupụta, ọ nweghị ụzọ ị ga-esi nwee olileanya na ọ ga-efe efe. Agbanyeghị, mgbe ngalaba nkọwa vidiyo gị juputara n'okwu na-atọ ụtọ na nke bara uru, ohere nke òkè na-arị elu. Yabụ, zụta nkọwa YouTube ka ị nwekwuo ohere ịchọta ihe ịga nke ọma n'otu abalị.
Na-adọta ndị na-ege ntị ọhụrụ: YouTuber ọ bụla nwere ndị na-ege ntị. N'ezie, nha nke ndị na-ege ntị bụ ndị ikwu, dabere na ọkwa nke YouTuber. Dịka ọmụmaatụ, PewDiePie nwere onye ofufe zuru ụwa ọnụ na-esote, yabụ ndị na-ege ya ntị buru ibu n'ihe gbasara nha. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ YouTuber ọhụrụ na ọnọdụ ahụ, ndị na-ege gị ntị lekwasịrị anya nwere ike dị ntakịrị. Yabụ, ịchọrọ nkọwa sitere n'aka ndị na-ege gị ntị ma ọ bụrụ na ị ga-eme ka ọhụhụ nke ọwa gị gbasaa wee kpọọ ndị na-ege ntị ọhụrụ ka ha nọrọ na ya. Ka ụdịdị dị iche iche dị na ngalaba nkọwa gị, ka ụdịdị dị iche iche ga-adị na ndị na-ege gị ntị.
Ịhazi nkọwa YouTube: Ndụmọdụ icheta
Obi dị m ụtọ na YouTube na-enye ụfọdụ ikike ndị njikwa n'aka ndị ọrụ nke ikpo okwu, opekata mpe n'ihe gbasara ijikwa nkwupụta. Ọ bụ otu ihe ịzụrụ nkwupụta YouTube maka itinye aka na ndị ọrụ ka ukwuu, mana ọ bụ ihe ọzọ iji megharịa nkwupụta organic. N'akụkụ ikpeazụ a nke akụkọ a, anyị ga-eso gị kerịta ụfọdụ ndụmọdụ kacha mma maka ịhazi okwu na ọwa YouTube gị:
Soro na nkwupụta ndị pụtara ìhè: Ị na-adịghị na-azaghachi okwu mgbe niile. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, YouTube ewebatala ịhụnanya, mmasị, na enweghị mmasị maka ịza ajụjụ. Ọ na-emekwa ka ndị ọrụ mara nke nkwupụta nke algọridim ya na-eche na a ga-etinye aka na ya. Ọ na-adịkarị, nkwupụta dị otú ahụ na-egosi na mkpado 'okwu pụtara ìhè'. Mkpado ndị a anaghị adịru mgbe ebighị ebi, ebumnuche ha bụ ime ka gị na ndị na-ekwu okwu na-emekọ ihe n'azụ okwu ndị ahụ akọwapụtara. Ị nwere ike, n'ezie, họrọ ịghara itinye aka na nkwupụta ndị pụtara ìhè. Agbanyeghị, buru n'uche na nke a bụ njirimara YouTube na-enye gị maka ọdịmma gị.
Lezienụ anya maka okwu ndị na-ekwesịghị ekwesị: Trolls ma ọ bụ ndị ọrụ ịntanetị nwere ebumnuche ọjọọ nwere ike imebi ngalaba nkọwa gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị naghị ehichapụ ihe na-ezighi ezi. N'ezie, ị nwere ike ịkọ nkwupụta ndị ahụ wee gwa ndị debanyere aha gị ka ha mee otu ihe ahụ. Agbanyeghị, YouTube na-ejupụta na arịrịọ mkpesa, ọ na-ewekwa oge maka ha ịhazi arịrịọ ahụ. Yabụ, ọ kacha mma iburu okwu n'aka gị wee na-elele ngalaba nkọwa maka ọdịnaya rụrụ arụ ma ọ bụ mkparị. Anyị na-akwado ịwụnye ngwa YouTube Studio na ama gị ka ị wedata nkọwa mgbe ị na-aga.
Jiri atụmatụ azịza Smart maka ịrụ ọrụ nke ọma: Ọ bụrụ na vidiyo nwere ọtụtụ narị na puku kwuru puku kwuru, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume maka onye okike idepụta azịza pụrụ iche maka ha niile. A sị ka e kwuwe, ndị okike kwesịrị ịdị na-eme ihe kachasị mma - ịmepụta. Agbanyeghị, enwere njirimara ị nwere ike iji hụ na azaghachi okwu ọ bụla - Smart Reply. Njirimara a na-apụta na-akpaghị aka mgbe ị na-eme nchọgharị site na nkwupụta na YouTube Studio. Ọ bụ ihe na-emepụta nzaghachi dabere na algọridim, nke na-achọpụta ọnọdụ na okwu nke nkwupụta ma na-ebute nzaghachi akpaaka. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị họrọla okwu ekele ịzaghachi, atụmatụ Smart Reply ga-ewepụta azịza dịka 'Daalụ nke ukwuu!'. Naanị ihe ị ga - eme bụ ịpị ma ọ bụ kpatụ (dabere n'ụdị ngwaọrụ ị na-eji nweta ụlọ ọrụ YouTube) na nzaghachi nke nhọrọ gị.
Tupu ịkọ nkwupụta, lelee ma ọ ga-arụpụta nsonaazụ ọ bụla: Naanị n'ihi na gị na ụyọkọ ndị debanyere aha gị na-akọ nkwupụta nke nwetara gị n'ọnọdụ ọjọọ apụtaghị na ndị na-ahụ maka YouTube ga-ehichapụ okwu ahụ. Cheta, YouTube nwere ụkpụrụ nduzi na ụkpụrụ obodo nke ya. Yabụ, ọ bụrụ na nkwupụta ahụ emebighị ụkpụrụ nduzi na ụkpụrụ ndị ahụ nke ọma, ọ nweghị ohere na YouTube ga-ehichapụ ya. Yabụ, kama ịla oge na nkwupụta dị otú ahụ, buru ụzọ gabiga ụkpụrụ obodo YouTube wee mee ihe ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ma ọ bụ ọzọ, gaa n'ihu ma nọgide na-eme ihe gị.
Ọ bụrụ na vidiyo na-ebute oke esemokwu, gbanyụọ nkwupụta: Mgbe ụfọdụ, vidio ndị na-efe efe na-enwekarị arụmụka, karịsịa ma ọ bụrụ na ha na-emetụ isiokwu ndị dị nro dị ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nkwenkwe okpukpe. Mgbe nke a mere, ndị na-ege ntị na-emekarị ka ndị na-ege ntị na-atụgharị uche, n'ihi ya, ngalaba nkọwa na-atụgharị ghọọ ogige agha. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ị ​​nwere ike nweta amamọkwa na-adịghị agwụ agwụ, ma ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ha ga-amasị gị. Ihe kacha mma ime n'ọnọdụ a bụ gbanyụọ okwu maka vidiyo na-akpata esemokwu niile. Ozugbo nkwupụta ndị ahụ kwụsịrị, ndị na-ekiri agaghị enwe nhọrọ nke ịza ajụjụ na vidiyo ahụ, ị ​​​​gaghị enwe ike ịme ihe ngosi niile.
Yabụ, anyị na-eru nso na njedebe nke ọkwa a, mana tupu anyị abịarute nso, anyị ga-achọ ichikota ihe niile anyị kesara gị ruo ugbu a.
Nke mbụ, ị kwesịrị ị na-agbalị mgbe niile imeziwanye ọwa gị n'ụzọ ọ na-ebute uto organic. N'ikpeazụ, naanị uto organic gị ga-ekwu maka ọwa gị. Yabụ, ọ bụrụ na ị zụta ihe YouTube, cheta na ịghara ịdabere naanị na nkwupụta ị zụrụ. E kwuwerị, mkpebi ịzụta ihe YouTube bụ naanị iji mee ka uto nke ọwa YouTube gị dịkwuo elu ma ghara ịbụ ntọala ya.
Ịkwesịrị ịzụta nkọwa YouTube ahaziri ahazi wee zere ịzụrụ ndị debanyere aha bot, mmasị na nkọwa. Nkwupụta omenala ga-enye ihe ọ pụtara, ebe nkọwa bot ga-ebuli ọnụ ọgụgụ nke nkwupụta ma ghara ime ọtụtụ ihe n'ihe gbasara imeziwanye mma. A na-enwekwa ike ịchọpụta bots site na algọridim YouTube, na-esote nke ikpo okwu nwere ike ime ihe siri ike megide ọwa gị. N'ọnọdụ kacha njọ, enwere ike kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsịchaa ọwa gị.
N'ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, cheta na ị na-emezigharị ihe ndị a na-ekwu na vidiyo gị site n'oge ruo n'oge. Dị ka o kwesịrị, ị kwesịrị ịhazi oge maka ịza ajụjụ wee rapara na ya.